ဦးစီးဌာနပြန်ကြားရေး | မျှော်လင့်ခြင်း Medical Center မှတွင် Dream
ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံကမိသားစု, နိုင်ငံခြားရေးအလုပ်သမား, ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်နာတာရှည်ရောဂါများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကင်ဆာကျိတ်များ၏ဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ရန်, သငျသညျမှုကြောင့်ဘာသာရေးကွဲပြားခြားနားမှုဖို့အခက်အခဲတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ. ဒါ့အပြင်ဒီလိုသွေးအားနည်းရောဂါအဖြစ်ရောဂါများကြောင့်ဆေးခန်းများတွင်ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှအမြင်များဤအမျိုးမျိုးတွေအများကြီးဘို့ခဲယဉ်းသည်ပင်လျှင်, ငါသည်တဲ့ professional နိုင်ငံခြားမြင်လျှင်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်. မြေတပြင်လုံးအိပ်မက်မျှော်လင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာနာတာရှည်ဖျားနာများအတွက်အထူးပြုစောင့်ရှောက်မှုကမ်းလှမ်း.
လူအသွေးရောဂါများ, သွေးအားနည်းရောဂါ, ဖူးရောင်နာ, Palliative စောင့်ရှောက်မှု, နာတာရှည်ဆေးရုံ, နိုင်ငံခြားရေးဆေးပညာဆိုင်ရာ
ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
အခက်အခဲဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဆေးရုံနှင့်အတူဆေးရုံသုံးပြီးရှိသည်သောမိန်းမတို့သည်, ဆိုးလ်မြို့ကြက်ခြေနီဆေးရုံကြီးယုတ်သားဖွားစောင့်ရှောက်မှုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်. ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများ, နိုင်ငံခြားရေးအလုပ်သမား, ဒုက္ခသည်များ, ချို့တဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှမိန်းမတို့အဘို့ကိုယ်ပိုင်မီးယပ်စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ဆောင်သွားရန်, အရည်အသွေးအဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို gynecology ပေး.
သွေးဆုံးရောဂါ, မစ္စစ်ကင်ဆာ, အထွေထွေမီးယပ်ရောဂါများ, မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်
ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
ကုသမှုခံယူရန်အခက်အခဲရှိသောအခွင့်မသာသူများအတွက်ဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်တိကျမှန်ကန်သောကုသမှုပေးရန်အရိုးအထူးကုဒေသများအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။. အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသူများ၏ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်အရည်အသွေးရှိသောကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်။.
တစ် ဦး ကျောရိုးရှိ disc ကို(disk ကို)ရောဂါ, ကျောရိုး stenosis, ကျောရိုးရှိသတ္တဝါကျိုး, ကျောရိုး, အရိုးပွရောဂါ, အနည်းဆုံးထိုးဖောက်ဏု
ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
ပခုံးနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများ, အတုအဆစ်အစားထိုး, Arthroscopic ခွဲစိတ်, အထက်ခြေလက်စိတ်ဒဏ်ရာ